Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 4,489 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
8 Sha'aban 1439 H
Talyaaniga, ama Jamhuuriyadda talyaaniga (Af-Taliyaani Repubblica italiana) waa dawlad ku taala qaarada yurub waxa uuna xuduud la wadaagaa wadamada Faransiiska iyo wadanka Iswiisarland iyo wadanka Austriya waxa kale oo uu soodin la leeyaay wadanka Isloveeniya, dhulaka Taliyaaniga waxaa uu ka koobanyahay sadex wadan oo kala ah dawlada Taliyaaniga ee caanka ah iyo wadanka San Marino oo ah imaarad madax banaan oo ku taala gudaha wadanka Taliyaaniga waxa kale oo wadanka taliyaaniga ku dhex yaala dawladda yar ee looga taliyo dadka haysta madhabta kaatooliga ee diinta kiristanka oo ku dhex taala gudaha Roma caasimada wadanku waa roma inta badan dadka reer taliyaanigu waxa ay haystaan diinta kiristanka raysal wasaaraha wadanku hada waa salfiyo barlaskooni lacagta wadankaa lagu isticmaalaa waa lacagta midawga yurub ee yoorada loo yaqaano taliyaanigu waa dawlad wayn oo caana taariikh soo jireenan wuu leeyahay dawlada taliyaanigu waxa ay ka midtahay dawladaha loo yaqaano G8 ee xaga warshadaha hore uga maray taliyaanigu waxa uu gumaystay wadamu kamida qaarada afrika sida soomaaliya ertariya iyo libiya luqada wadanku waa taliyaani taliyaanigu waa jamhuuriyad dimuquraadi ah taliyaanigu waxa uu ku yaala bada dhexe halkaas oo ay ku taalo jasiirada sisiiliya oo ah qayb ka mid ah wadanka taliyaaniga taliyaanigu waxa uu leeyahay warshado badan oo wax soo saara ganacsiga taliyaanu badanaa waxa uu gaadhaa Afrika bogan waxaa qoray. (SII AQRI)
Taariikhdu Maata Waa 23 Abriil 2018 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Ensiim waa Biomolikule oo xowli ama boobsiis ku sameeyo waxyaabaha kimikaalka dibusocodka leh. Ensiim badankooddu waxay ka sameesanyihiin Borotiin. Shaqooyinka ugu badan ee ka dhaca Unuga, waxa ugu badan ee ay isticmaalaan waa Ensiim, si ee shaqada u dhakhsato. Micnaha Ensiimka waxa uu yahay in uu wax boobsiiyo ama xowli ku daro waxyaabaha qaarkood oo dibusocodka leh, wuxuuna u shaqeeyaa sida katalaysyaasha kale, wuxuu soo ridaa tamar hooseeya (Ea ama ΔG‡), si uu uga dhashto dibusocod, taasna waxaa ka soo baxo, dibbu socod aad u xoogan, oo malyan jeer ka xoogan, xowliga kuwa aan katalaysyaasha ahayn. Dibusocodka noocan ah looma isticmaalo Ensiim, waxay badiyaan ama saa'iidiyaan kuwa kale ee dib u socodka leh ee ay isku midka yihiin. Ensiimka waxa oo uga go'an yahay katalasyaasha waxaa ka mid ah: si sax ah ayuu wax u keenaa, waxaana lagu yaqaanaa in uu badiyo ama ka dhigo Kombondiga Orgaaniga ah ilaa 4000 oo dib u socod ah. Nin la dhihi jiray (Eduard Buchner) oo Jarmal ahaa, wuxuu Ensiimka mar ka soo saaray wax la idhaa (DNA polymerase), waana meesha laga soo alifay DNA'ga.
Goobaha Lagu Aasay Sunta ee xeebaha Soomaaliya Qashinka sunta halista ah wuxuu dhib weyn ku hayaa xaaladda caafimaad ee Soomaalida guud ahaan gaar ahaan kuwa dega xeebaha, waxaana fududeeyey damiir laaweyaal soomaaliyeed iyo burcad caalami ah kuwaasoo keena sunta mar walba dalka Soomaaliya.
♦Geelu geel fulay gaadhi maaye haka daba fulo. ♦Walaalkaa oo kuu macaan halmar lama wada muudsado.
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 4,489 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin